बुटवलमा बिरामी भेटिएपछि, डेंगु ‘खोज र नष्ट’ अभियान (फोटो फिचरसहित) – Health Post Nepal
२०७५ असोज २९ गते १०:०७
रुपन्देहीमा डेंगुका बिरामी देखिएपछि बुटवलमा डेंगुको विषयमा सचेतना अभियान चलाइएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाकाअनुसार घरदैलो, माइकिङ, रेडियो सूचना र पप्पलेटको माध्यमबाट सचेतना अभियान चलाएको छ । टोल विकास संस्था, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र नगरभित्रका स्वास्थ्य सस्ंथाहरुलाई अभियानमा सहभागी गराइएको नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत कपिल गौतमले जानकारी दिए ।
लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालकाअनुसार ४० जनामा डेंगु देखिइसकेको छ, भने डेंगुको कारण एक जनाको मृत्यु भइसकेको छ । मृत्यु हुनेमा तिलोत्तमा नगरपालिकाका वृद्ध छन् । डेंगुको सतर्कताका लागि सचेतना अभियान सञ्चालन गरिएको बुटवल वडा नं. ११ का वडाअध्यक्ष रामचन्द्र खनालले बताए । सचेतना अभियानमा हिँड्नेहरुले जमेको पानीमा कालो मोबिल र मट्टितेल छर्किने, नाली र झाँडी सफा गर्नका लागि सहभागी गराउने कामसमेत गरिरहेको बताए । वडा नं. ११ मा मात्र ६० वटा टोल विकास संस्था र ४१ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका रहेका छन् ।
अञ्चल अस्पतालका मेडिकल रेकर्डर अधिकृत लक्ष्मीराज रेग्मी यो संख्या चार अस्पतालको रेकर्ड मात्र हो । बुटवल क्षेत्रमा १५ अस्पताल रहेकोमा खत्री नर्सिङ होम, क्रिमशन अस्पताल र गौतमबुद्ध सामुदायिक अस्पतालले मात्र डेगुको रिर्पोटिङ गरेका छन् । तीनसहित लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालको रेकर्डमा मात्र ४० जना देखिएको हुँदा यो संख्या अझ बढिरहेको हुन सक्ने रेग्मीले बताए । डेंगु देखिने महिना सुरु अघि नै डेंगुका बिरामी देखिएको उनले बताए । एक दुई जनामा बैशाखमै देखिएको डेंगु साउन महिनामा यो क्रम बढेर गएको लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालको सूचना अधिकारी लक्ष्मीराज रेग्मीले बताए । सामान्यतः असोज महिनादेखि देखिने डेंगुका बिरामी यसवर्ष साउन महिनादेखि देखिएको जनस्वास्थ्य कार्यालय, रुपन्देहीले जनाएको छ ।
जनस्वास्थ्य कार्यालयका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक केदारनाथ शाहकाअनुसार देखिएका डेंगुका बिरामी अधिकांश बुटवलका छन् भने अरु तिलोत्तमा र केही बाहिरी जिल्लाका छन् । गत वर्ष असोज महिनादेखि पौष महिनासम्म रुपन्देहीमा डेंगु देखिएको थियो । डेंगुबाट गतवर्ष ९ सय ४७ जना प्रभावित भएको जनस्वास्थ्य कार्यालयको भनाई छ ।
डेंगुको बढी जोखिम बुटवल उपमहानगर पालिका क्षेत्र नै देखिएको छ । त्यसमध्ये पनि साविकको बुटवल नगरपालिका क्षेत्रमा बढी जोखिम छ । डेंगु देखिनुमा यस क्षेत्रभित्रका ढल फोहर हुनु, खाल्टाखाल्टुमा पानी जम्नु, मोटर गाडीका टायर, ट्युव व्यवस्थित नहुनुजस्ता कारण हुन् । गतसालको ९ सय ४७ मध्ये बुटवलमा मात्र ५ सय ५७ बुटवलमा भेटिएका थिए । बुटवलपछि तिलोत्तमा नगरपालिका पनि डेंगुको जोखिम क्षेत्र भएको जनस्वास्थ्य कार्यालय, रुपन्देहीले जनाएको छ ।